कुनै पनि केटीले तपाईंलाई मन पराएको कसरी थाहा पाउने ? – Sidha Post 24
कुनै पनि केटीले तपाईंलाई मन पराएको कसरी थाहा पाउने ?
लुकी लुकी हेर्नु
यदी कुनै केटी तपाईका स साना गतिविधि पनि याद राख्छन् भने बुझ्नुस् की उनको तपाइर्ंप्रति रुची छ । उनले तपाईलाई साच्चिकै मन पराउँछिन् र तपाईलाई बारम्बार हेर्ने गर्छिन् । त्यति मात्र हैन, उसले तपाईको बारेमा आफ्ना साथीभाईलाई समेत पक्कै बताउँछिन् । जसले गर्दा तपाईलाई केटीले मात्र हैन, उनका साथीहरुले पनि नोटिस गर्न थाल्छन् ।
मेरो छाेरी लाई ब’चाई दिनु होला, कठै बि:चरा ग’रिब भए*पछि अस्प’ताल ले पनि उप’चार गर्न दिएन…..भि’डियो सहित।